Minilik jimlaadhaan oromoo fixe harka Fi harma – Kichuu
HomeNewsMinilik jimlaadhaan oromoo fixe harka Fi harma
Minilik jimlaadhaan oromoo fixe harka Fi harma
Minilik jimlaadhaan oromoo fixe harka Fi harma abbootaa Fi haawwota keenyarraa mure
Hayla Sillaaseen Maammoo Mazammir fannise.
Dargiin Taaddee Birruu fannise.
Mallas Zeenaawii Eebbisaa Addunyaa ajjeese. Abiyot nafxanyichi Hacaaluu ajjeese
Mootummoonni Itoophiyaa kan kaleessaas kan har´aas Oromoof tokkuma. Garuu hammeenyi Abiyot nafxanyichaa kan sirnoota duraarraa waan adda godhutu jira. Olaantummaa Nafxanyootaa ijaaruuf jecha goota Oromoo ajjeesee ka´ee ittiin diraamaa tolchee hogganoota Oromoo hidhaatti naqe. Dhugaan kun yoo sii liqimfamuu dide mana haakimaa dhaqii waldhaanami.
Yaya Beshir galatoomi dhugaa keetii.
“Itoophiyaa keessatti Diinotni gurguddoo Oromoo fi Amantii islaamaa kan ta’an jarri lamaan kuni har’a wal gahanii marii irra turan. Kan nama ajaa’ibu ‘Yeroon Itoophiyummaa itti fayyisnu AMMA jedhan’ amma jechuun isaanii kunibhiika guddaa qabdi. Jawaar fi Hayyoonni Oromoo hedduun yeroo mana hidhaa jiran kanatti.Oromoo Afaan qabsiisanii sirna nafxanyummaa deebisuuf yeroon Itoophiyaa Itti fayyifnu amma jechuu isaaniti.koottu nyaatta jedhe abbaan lataa.!!
Namtichi inni jalarraa kun bara dargii fincaan ofirra fincaa’aa wayyaanen isa boojite, bara 27 eessa akka ture namni beeku hin jiru. ega QEERROON bilisa isa baaftee booda mul’achuu eegale dhiheenyuma kana akkas jedhee ture “dheengadda dugda keessa rukutamee maqaletti galte” jedheenii wayyaanetti dhaadate Finfinnee taa’ee.Qeerroo manatti galuu dide rasaasaan adda keessa haleelanii galchuudha jedhee fokkore.
Kanaadha Itoophiyaan Isaan faarsan
Itti Gaafatamaan Waajjira ABO Gullallee humna tikaa Koloneel Abiy Ahmadiin magaalaa Finfinnee keessatti ukkaanfame.
Eritrea: What are the Leaders of Ethiopia and Eritrea up to?